ဒါရိုက်တာဝိုင်းဟာ သူရိုက်ကူးတဲ့ဖိနပ်ကြော်ငြာကို နိုင်ငံရေးပါဆိုပြီး ပုံကြီးချဲ့ စွပ်စွဲနေတယ်ဆိုပြီး ပြောလာတဲ့ ယုန်လေး - Cele Connections
ယုန်လေးကတော့ အနုပညာကို သူများထက် ဝါသနာကြီးသူဖြစ်ပြီး သူချပြတဲ့ တစ်ချို့သော အနုပညာတွေဟာ အများပြည်သူအတွက် အထင်အမြင်လွဲမှားစရာတွေဖြစ်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာလည်း ယုန်လေး ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဖိနပ်ကြော်ငြာတစ်ခုဟာ ပရိသတ်တွေအပြင် အနုပညာအသိုင်းအဝိုင်းကပါ ဝေဖန်နေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံကျော် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင်ဝိုင်းကလည်း “ယုန်ကိုအာရုံရောက်နေရင် နောက်ကမိထားတဲ့ကျား လွတ်သွားလိမ့်မယ်။ လက်မည်းတာကောနဲ့ အာဏာရှင်တွေက အာရုံလွှဲတာ သိပ်တော်တာ” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာမှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ဒါရိုက်တာဝိုင်းရဲ့ ရေးသားချက်နဲ့ ပက်သတ်ပြီး “ကိုဝိုင်းရေ အစ်ကို့ ကြည့်ရတာ အကုသိုလ်များလိုက်တာဗျာ။ ကျွန်တော် အစ်ကို့ အနုပညာကို လေးစားတဲ့လူပါ။ အစ်ကို့ကို တစ်ခါမှ Foul မထုဖူးပါဘူး။ တွေ့တိုင်းလည်း လေးလေးစားစားဆက်ဆံပါတယ်။ ဘယ်လိုဖြစ်လို့ နိုင်ငံရေးထဲ လိုက်ဆွဲထည့်နေတာလဲ? ဘယ်သူကရော MI STAR ကြေညာကို စိတ်ဝင်စားခိုင်းလို့လဲ? မိန်းကလေး အကောင့်အစစ်တွေတချို့ တကယ်သူတို့ကြည့်ရတာ အဆင်မပြေဖြစ်သွားလို့ ဆဲတယ်။ နောက် ကျွန်တော် အလုပ်လုပ်ရင်ပိုဆင်ခြင်ရမယ်။ ဒီလောက်ပဲ မဟုတ်ဘူးလား။အမူ့မကြီးကြီး အောင်ဆွဲချဲ့ကျတယ်။ ကြီးသွားတော့ အာရုံလွှဲအောင်လုပ်တယ်ဆိုပြီး ထပ်စွပ်စွဲတယ်။ အနုပညာအလုပ် အကုန်ရပ်ပေးစေချင်တာလား။ Fb ပါရွေးကောက်ပွဲပြီးမှ သုံးရတော့မှာလားဗျာ” ဆိုပြီး ရေးသားထားပါတယ်။
ယုန်လေးကတော့ ဖိနပ်ကြော်ငြာနဲ့ အမျိုးသမီးတွေကြားမှာ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်မှုတွေခံနေရသလို အနုပညာရှင်အချင်းအချင်းကလည်း သူ့ကို စွပ်စွဲနေကြတယ်လို့ ဆိုလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒါရိုကျတာဝိုငျးဟာ သူရိုကျကူးတဲ့ဖိနပျကွျောငွာကို နိုငျငံရေးပါဆိုပွီး ပုံကွီးခြဲ့ စှပျစှဲနတေယျဆိုပွီး ပွောလာတဲ့ ယုနျလေး
ယုနျလေးကတော့ အနုပညာကို သူမြားထကျ ဝါသနာကွီးသူဖွဈပွီး သူခပြွတဲ့ တဈခြို့သော အနုပညာတှဟော အမြားပွညျသူအတှကျ အထငျအမွငျလှဲမှားစရာတှဖွေဈခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒီကနမှေ့ာလညျး ယုနျလေး ကိုယျတိုငျရိုကျကူးထားတဲ့ ဖိနပျကွျောငွာတဈခုဟာ ပရိသတျတှအေပွငျ အနုပညာအသိုငျးအဝိုငျးကပါ ဝဖေနျနကွေတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ နိုငျငံကြျော ဒါရိုကျတာ သရုပျဆောငျဝိုငျးကလညျး “ယုနျကိုအာရုံရောကျနရေငျ နောကျကမိထားတဲ့ကြား လှတျသှားလိမျ့မယျ။ လကျမညျးတာကောနဲ့ အာဏာရှငျတှကေ အာရုံလှဲတာ သိပျတျောတာ” ဆိုပွီး သူ့ရဲ့ ဖစျေ့ဘုတျစာမကျြနှာမှာ ရေးသားခဲ့ပါတယျ။
ဒါရိုကျတာဝိုငျးရဲ့ ရေးသားခကျြနဲ့ ပကျသတျပွီး “ကိုဝိုငျးရေ အဈကို့ ကွညျ့ရတာ အကုသိုလျမြားလိုကျတာဗြာ။ ကြှနျတျော အဈကို့ အနုပညာကို လေးစားတဲ့လူပါ။ အဈကို့ကို တဈခါမှ Foul မထုဖူးပါဘူး။ တှတေို့ငျးလညျး လေးလေးစားစားဆကျဆံပါတယျ။ ဘယျလိုဖွဈလို့ နိုငျငံရေးထဲ လိုကျဆှဲထညျ့နတောလဲ? ဘယျသူကရော MI STAR ကွညောကို စိတျဝငျစားခိုငျးလို့လဲ? မိနျးကလေး အကောငျ့အစဈတှတေခြို့ တကယျသူတို့ကွညျ့ရတာ အဆငျမပွဖွေဈသှားလို့ ဆဲတယျ။ နောကျ ကြှနျတျော အလုပျလုပျရငျပိုဆငျခွငျရမယျ။ ဒီလောကျပဲ မဟုတျဘူးလား။အမူ့မကွီးကွီး အောငျဆှဲခြဲ့ကတြယျ။ ကွီးသှားတော့ အာရုံလှဲအောငျလုပျတယျဆိုပွီး ထပျစှပျစှဲတယျ။ အနုပညာအလုပျ အကုနျရပျပေးစခေငျြတာလား။ Fb ပါရှေးကောကျပှဲပွီးမှ သုံးရတော့မှာလားဗြာ” ဆိုပွီး ရေးသားထားပါတယျ။
ယုနျလေးကတော့ ဖိနပျကွျောငွာနဲ့ အမြိုးသမီးတှကွေားမှာ ပွငျးပွငျးထနျထနျ ဝဖေနျမှုတှခေံနရေသလို အနုပညာရှငျအခငျြးအခငျြးကလညျး သူ့ကို စှပျစှဲနကွေတယျလို့ ဆိုလာတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ Cele Connections ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။